‘Toxic’ Culture and Troubling Incidents at SoftBank’s Jewel in India | Myanmar Business Today
Home Business Regional ‘Toxic’ Culture and Troubling Incidents at SoftBank’s Jewel in India
‘Toxic’ Culture and Troubling Incidents at SoftBank’s Jewel in India
Oyo is part ofagroup of prominent startups that have sprinted to get as big as possible, fed by money from large investors such as Japanese conglomerate SoftBank. Now some of those young companies – from office rental company WeWork in New York to delivery service Instacart in San Francisco – have started showing cracks in their businesses.
At the same time, two other big investors, Sequoia Capital and Lightspeed Venture Partners, reduced their holdings. The venture capital firms, which both hold board seats at Oyo, sold $1.5 billion of their stock – about half their stakes – to Agarwal. He borrowed money to buy the shares and paid the venture firmsaprice that valued Oyo at $10 billion.
Mukhopadhyay, who began working at Oyo in August 2018, said employees were under so much pressure to add new rooms that they brought hotels online that lacked air conditioning, water heaters or electricity. He and eight others said their managers had asked them to engage inamonthly shell game of briefly inserting these unavailable properties into Oyo’s listings – complete with fake photographs – to help impress investors.
Ghosh, who left the India job and joined Oyo’s board, said that some hotels open in stages and that “there is no padding.”
ဈေးသက်သာသော ဟိုတယ်အခန်းများ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် Oyo သည် အိန္ဒိယတွင် တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးသော ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကုမ္ပဏီများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာပြီး ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့အကြိးဆုံးသော ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွဲ ဖြစ်လာရန် ရည်မှန်းထားသည်။
သို့သော် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ Oyo ၏ တိုးတက်လာမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာ လုပ်ငန်း၏ အနေအထားနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်နေကြသော လုပ်ငန်းအအလေ့အထအပေါ် အခြေတည်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးအစီခံ ချက်များ၊ တရားရုံး စာရွက်စာတမ်းများ၊ လက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေဆဲ၊ ယခင်ကလုပ်ကိုင်ဖူးသော အလုပ်သမား ၂၀ ခန့်ကို မေးမြန်းထားသည့် အင်တာဗျူးများအရသိရသည်။ အများစုမှာ ကုမ္ပဏီဘက်က လက်တုန့်ပြန်လာမည်ကို စိုးရမ်သောကြောင့် အမည်ဖော်ပြခံလိုခြင်းမရှိကြပေ။
Oyo မှာ ဝန်ဆောင်မှုမပေးတော့သော ဟိုတယ်များကဲ့သို့သော အသုံးမပြုတော့သည့် ဟိုတယ်အခန်းများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးကြောင့် ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲ၏ ပြောဆိုချက်အရလည်းကောင်း၊ လက်ရှိနှင့် ယခင် အလုပ်သမားများ၏ ပြောဆိုချက်များအရလည်းကောင်း သိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် Oyo ၏ ဝက်ဆိုဒ်တွင် အခန်းများဖောင်းပွလာသည်။
အခန်းထောင်ပေါင်းများစွာမှာ လိုင်စင်မရှိသော ဟိုတယ်များ၊ တည်းခိုခိုးများမှ ဖြစ်သည်။ တရားမဝင်အခန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အာဏာပိုင်များနှင့် ပြဿနာမတက်စေရန်အတွက် Oyo သည် ရဲများ၊ အခြားသော တာဝန်ရှိသူများအား အခမဲ့ တည်းခိုခွင့်များပေးကြောင့် လက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေဆဲ Oyo ဝန်ထမ်း၊ ယခင်က လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသော ဝန်ထမ်းဟောင်း စုစုပေါင်း ကိုးဦးထံမှလည်းကောင်း ကုမ္ပဏီတွင်း ပေးပို့သည့် WhatsApp မက်ဆေ့ဂျ်များအရလည်းကောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် Oyo အနေဖြင့် ဟိုတယ်များအပေါ် အပိုကြေးများ ထပ်ဆောင်းခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ပေးရမည့် အခကြေးငွေများကိုလည်း ဟိုတယ်များကို ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ အချို့သော ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများကတော့ Oyo ကုမ္ပဏီအပေါ် ရာဇဝတ်မှုနှင့် တရားစွဲရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။
Oyo မှာ ဂျပန် လုပ်ငန်းစုကြီး SoftBank ကဲ့သို့သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် ကုမ္ပဏီကြီးများက ငွေကြေးများ ပုံအော်ထည့်သွင်းခြင်းကြောင့် ထိုးတက်လာသည့် ပေါ်ထွန်းစ လုပ်ငန်းကြီးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုအခါတွင် အဆိုပါ ကုမ္ပဏီငယ်များမှာ လုပ်ငန်းတွင် အက်ကြောင်းများ ပြလာနေသည်။
Oyo ပြိုလဲမှုသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ပေါ်ထွန်းစ လုပ်ငန်းများ၏ အနေအထားကို ပြသနေသည်။ အဆိုပါ ကဏ္ဍမှာ ယခုအခါတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံချီသော ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ရရှိနေသည်။
ထို့အပြင် Oyo ၏ အဓိက အကြီးဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလည်းဖြစ်၊ ကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာ ထက်ဝက်ခန့်ကိုလည်း ပိုင်သော SoftBank အတွက် ထိုးနှက်ချစ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။
SOURCEVindu Goel and Karan Deep Singh (The New York Times)
Previous articleAustralian Fires Hit Key Dairy Regions
Next articleChina Opens Up Oil and Gas Exploration, Production for Foreign, Domestic Firms